Maxkamadeynta martidaada martigelinta rajadaada
7 Talooyin Surefire ah oo ku saabsan Maxkamadeynta Boostada Martida Marti
Khamiista, Sebtember 27, 2012 Khamiista, Sebtember 27, 2012 Cassie
Marti gelinta martida ayaa ah geedi socod adag oo xasaasi ah oo ay tahay in loola dhaqmo sida bilowga xiriir kasta: si dhab ah oo taxaddar leh. Anigoo ah milkiile blog ah, kuuma sheegi karo inta jeer ee la iimayl ahaan si xun u qoray, emayllada spammy. Baloogyada, sida cilaaqaadka, waxay qaataan dadaal badan oo boggaga martida loo yahay waa inuusan ula dhaqmin sidii geedi socod aan macquul ahayn.
Halkan waxaa ah 7 talooyin shukaansi oo hubin ah oo loogu talagalay boodhadhka martida ee maxkamadda blogger:
1. Baro ciyaartaada dhici kara
Kahor intaadan kuqarxin bologga maqaalladaada ama soo gudbintaada, baro barta blogger-ka.
Akhriso Boggooda ku saabsan, baro magacooda, raac iyaga barta Twitter-ka, oo aqri dhowr qoraal oo baloog ah si aad u barato codka boggooda.
Haddii aad runtii rabto inaad aragti sameyso, ku dhaaf faallooyinka qoraalladooda, ka jawaab fariimaha ay soo qoraan, la wadaag maqaallada aad ka hesho shabakaddaada.
Ka fikir dhowr maqaal oo fikrado ah oo u shaqeyn lahaa baloogga. Maxaa ka maqnaa balooggan? Maxaa shaqeyn lahaa? Eeg waxa ku dhacaya naqshadooda iyo waxa dadku ka hadlayaan warbaahinta bulshada.
2. Samee tallaabada ugu horreysa
Hagaag, waxaad kudhisatay kalsoonida bartaada waxadna diyaar u tahay inaad xiriirkaaga gaarsiiso heerka xiga. Waad ogtahay in balooggan uu kugu habboonaan doono adiguna aad fikrad ka haysato waxa aad jeceshahay inaad ku dhejiso ama u gudbiso blogger-ka. Hadda waa waqtigii aad guuri lahayd.
Ka dib markaad akhriso tilmaamaha blogger-ka, kala soo xiriir iyaga oo adeegsanaya habka ay doorbidayaan. Haddii aysan ku qorin tilmaamaha ama habka isgaarsiinta ee doorbidooda boggooda, weydii!
Markaad laxiriirto, noqo shaqsiyad - adiguba! Ogeysii cidda aad tahay iyo sababta aad ula xiriirayso-boostada martida!
3. Noqo nin jilicsan
Sida aad albaabka ugu furi lahayd marwada, dadka wax qora ee wax qora ayaa jecel in iyagana la soo jiito.
U fududee blogger-ka. Marka maqaalkaaga la gudbiyo (sida ku cad tilmaamahooda), ku dar sawirro oo buuxi wixii faahfaahin dheeri ah ee WordPress ah. Tan waxaa ku jiri kara sumado, muuqaal muuqaal ah iyo shuruudaha SEO.
Hubso inaad qaddarinaysid sawirro kasta oo la isticmaalay oo aad leedahay qalad naxwe ama higgaadin ah. Tani waxay umuuqataa mid iska cad, laakiin dareenka ugu horreeya ayaa ah wax walba markay tahay xiriirada iyo baloogyada martida.
4. Ha noqon Cilaawe
Haddii aad dirto qoraalkaaga oo aysan kor u kaceyn isla maalintaas ama xitaa maalinta xigta, ha u dulqaadan milkiilaha baloogga-sida aadan si isdaba joog ah u soo wici doonin ama u soo qori doonin taariikhdaada markii ugu horreysay ee aad bilaabeysid xiriir !
Seddex ilaa todobo maalmood kadib, u dir fariin jeeg-fariin ah ama emayl ah oo aan hanjabaad aheyn. Ha noqon edeb daro!
Ka hubi barta baloogga ama Twitter-ka si aad u aragto waxqabadyadii dhowaa; cusbooneysiin cusub ma noqon karto in blogger-ku uu ku mashquulsan yahay waxyaabo kale.
5. Ku faan xiriirkaaga cusub
Markaad ku dhufato nasiib wanaag jacayl, inteena badani waxaynu doonaynaa inaynu ka qaylinno saqafyada sare. Ku daawee qoraalkaaga la daabacay isla xiisahaas.
Mar alla markii boostadaadu toos u socoto, la wadaag shabakadahaaga bulshada. Bloggers waxay jecel yihiin inay arkaan qoraalada bulshada lala wadaagayo! Helitaanka qoraal tayo sare leh oo blog ah ayaa la mid ah casho qurxoon oo saamiyada bulsheed ay yihiin creme brûlée!
6. Ha ka faa’iideysan
Qof kasta oo kale wuu ka daalay milkiilayaasha baloogyada oo doonaya magdhawga jagooyinka martida? Ma waxaad u jeeddaa, waxaan ku siinayaa tayo aad u wanaagsan, oo ku habboon, kana kooban mowduuc waxaadna rabtaa inaan ku siiyo?
Iskuday inaad si naxariis leh ugu sheegto milkiilaha baloogga inaadan awoodin inaad lacag siiso, laakiin waxaad ku farxi laheyd inaad ku abaalmariso deeqsinimadooda daabacaadda boostadaada adigoo ku xiraya kuwa kale ee wax qora iyo inaad bulshada la wadaagto maqaalkaaga.
Inta badan, milkiilaha balooggu wuxuu noqon doonaa mid naxariis leh oo ku qasban; kaliya waxay rabaan inay ogaadaan inay wax ka helayaan xiriirka oo aan loo isticmaalin!
7. Ka shaqee xagga xiriirka muddada fog
Shukaansi, sida baloog garaynta martida, waxay noqon kartaa daal; markii aad aragto taam wanaagsan, shaqada geli sidii aad u ilaalin lahayd ololka dhajinta martida.
Xidhiidh la samee barta internetka. Sii wad inaad wax u qorto, emayl u dir, tweet garee oo ku xir iyaga qorayaasha kale.
Ku dhajinta martida waxay ku saabsan tahay inaad xiriir la sameysid dadka khadka tooska ah iyo helitaanka soo-gaadhis Marnaba ma ogaan kartid, xitaa way kugula talin karaan ama waxay kugu bari karaan milkiileyaasha kale ee saaxiibtinimada leh.
Tags: Content Suuqbarta martidaboostada martidawarbaahinta bulshada
Cassie Gray waa Raadiyaha Shabakad Warbaahinta Raadinta ah ee dijitaalka ahku habboon iyo wuxuu ka shaqeynayay suuqgeynta internetka shan sano. Markii aysan wax ku qorin barta internetka ama ay ku sii sugnaato xilligan suuqgeynta iyo isbeddellada warbaahinta bulshada, waxay ku raaxeysataa inay waqtigeeda ku bixiso banaanka socodka, baaskiil wadida iyo doonnida. Raac barta Twitter-ka ee @cassaleenie.
Hagaajinta Is-Adeegsiga Sirdoonka
Maxaa Ka Shaqeeya Xayeysiinta Warbaahinta Moobilka Mowjadaha leh?
Oktoobar 3, 2012 at 3:00 AM
hI CAss, kani waad qodbay. Runtii waa talo fiican. Tilmaamahan waxaa ka mid ah waligey uma malaynayo inaan dhammeystiray hal talo, markaan isku dayo inaan sameeyo baloog internet ama marti aan iska leeyahay waxaan cagtayda ku hayaa dhulka oo aan is-ilaaliyaa.